Kunzima ukuthola umdlali waseshashalazini ube isikhungo sombuso ukunakekela komphakathi kanye cindezela kaningi ngaphezu Dryu Berrimor. amantombazane Filmography akuzona ngakho ezithandela abalandeli njengoba ukuphila kwakhe siqu, izikhathi ezinhle nezimbi phakathi emzabalazweni kanye zombango kanye ukubuya ukuziphatha evamile. Drew wakhulela emkhayeni abadlali, ngakho waba nesikhathi esimnandi ukuze uthole elahlekile futhi abaqapheli ngokwabo ngokwenza izindima njengoba kwenzeka ezinganeni eziningi, aqashiwe kusukela zisencane ku amabhayisikobho, kodwa Barrymore wathola amandla ukubandakanya esidlule zeziyaluyalu futhi babe omunye abadlali eliphakeme ikhokhwe .
A ozalweni enye yamadodana ka-umlingisi Barrymores
Drew kungokwalabo lwamakhosi waseshashalazini, okuyinto, ukubala Maurice Barrymore, tragedian abadumile IsiZulu kwekhulu XIX. Eminyakeni kwekhulu lamashumi amabili 20, wathola okuningi udumo Dzhon Berrimor, actress Umkhulu. Yena ikakhulu kudlalwa izindima Shakespearean, kumafilimu buthule, wethiwa yePhrofayli Omkhulu. uyise Drew, uJohane, sibonga ukubukeka ekhangayo usebenze njengomahluleli namaqhawe-abathandi, kodwa idume esengeziwe Antics yakhe elidumile futhi umlutha wotshwala kuka izindima yimpumelelo. UMama osaziwayo esizayo futhi wavela ezithombeni, Ildiko Dzhad Mako umsuka Hungarian.
Endryu Blayz Barrymore wazalelwa e-Los Angeles February 22, 1975. Drew Little ngiyitholile evela basungulwa uyise, John njalo odakiwe, akazithelanga ngabandayo izidakamizwa, ngakho ayevame Ukuthepha umkakhe nendodakazi. Ukuphila komkhaya ayisebenzanga, ngakho abazali abahlukanisile ngokushesha. Mhlawumbe wakhula kanzima abathintekayo psyche wengane, yingakho u-Andreya waba isiqalo engu 9 ukuba seqise, ephuzela equlekile.
izinyathelo Okokuqala enkazimulweni
Drew yaqala ukuzenza ngaleso 9 izelwe, indima yakhe yokuqala ubekade commercial for inja ukudla. Ngesikhathi kuqhubeka leli cala ingane yinja, kodwa ngokuphambene ukwesaba abadala, akagcini nje anikhalanga, kodwa ngisho wahleka ke ngokushesha kuvunyelwene ngayo kute kwentiwe indima. Eminyakeni emihlanu, wafika e ifilimu "States Altered", kodwa udumo yangempela ke wazuza ngemva konyaka, ngemva kokukhululwa kwe-amabhayisikobho "ET" Stivena Spilberga (ubaba ibhapathizwa Drew sika), lapho Barrymore kudlalwa Gerti. Ngemva kwalokho, u-Andreya lenyukele ku engakaze ibonwe eziphakeme, yonke iMelika bayahlonishwa wakhe, ubuso bakhe manje bese uvele kwi nesembozo omagazini fashion, amaMelika zikleliswe i umbhalo wesandla inkosazana kancane.
Ngo-1984, Drew inkanyezi kule melodrama 'ukuphikisana ezingahlangani "ngokweseka actress, yena uqokelwe" Golden Globe ". Ukulandela le mpumelelo, Drew nonina bamenywa ukuba nedili futhi amaqembu. inkazimulo enkulu kunayo yonke, simthande jikelele waphenduka ikhanda lika ubuhle kancane. Ngesikhathi izenzakalo wathenjiswa utshwala uDrew, kungukuthi wenqaba, okwaholela ukudakwa.
Biography Dryu Berrimor uyazi ukuthi izikhathi ezinhle nezimbi phakathi actress. Yilokho-ke yena igeziwe ngokuvutha udumo nothando jikelele, njengoba kube waqala ngenkuthalo ukuxoxa abezindaba Antics ezingemnandi kakade. Barrymore eneminyaka engu-9 waqala ukubhema esemncane baba isivakashi njalo club "Studio 54". I Drew engu-11 ubudala lungase lubizwe ngokuthi oludakayo wangempela, engu-12, yena obala ngabhema nensangu futhi 13 kwi-cocaine, ngemva kwayo kwaba maphakathi ukuvuselelwa. Ngemva konyaka, wabuya okwesibili, ngemva bayaye bazame ukuzibulala.
Eminyakeni engu-15, umfundi oyisichwensi abasha abashiya phakathi esikoleni futhi ngalishiya ikhaya. Ngokushesha ngemva kokuba inkantolo ukwenze Barrymore ukukhululwa ukunakekelwa kwabazali kanye kwadingeka ithuba bachithe izindaba zabo. Ngo-1990, yena wanyathelisa incwadi yakhe "Little Girl Lost", lapho bonke ubunzima ebuntwaneni Dryu Berrimor iye yachazwa. Filmography le nkathi ugcwele imisebenzi eminingi njengoba ngendlela engamukeleki wokuphila, ingxabano eqashiwe ukuhlolwa elichaza ukwehluleka actress abasha akuyona at zizinhle. Nokho ngokunjalo-90 zokuqala Drew wadonsa yena ndawonye futhi waqala kancane kancane ukubuyela ekuphileni okuvamile.
Ukubuya kancane kancane ezweni imboni yamabhayisikobho
Umlingisikazi Dryu Berrimor ukuziphatha kwabo ihlazo lase licishe zonakale umsebenzi wakhe. Yena kwakufanele ngempela kwekhefu elide, kodwa ngo-1992, u-Andrew babiziwe lokudlala indima yomuntu ovelele ku "Ubuthi Ivy", bese kulandele okunikezwayo kusuka abaqondisi ezahlukene. Kuyini ezithakazelisayo, Barrymore, ikakhulukazi amantombazane edlala ngaphandle izakhiwo notshwala yezidakamizwa, izigebengu, okungukuthi, uhlamvu wakhe kwakunjani ukuphila indima umdlali waseshashalazini.
Yakhe yokuqala "Golden Globe" Drew won 1992 befilimu "Crazy Arms". abadlali Ingane kunzima kakhulu ukusinda aphuma yezingane izindima omdala, ngoba izilaleli ngakujwayela kubo ngendlela ethile, ngiyazazi esemncane. Inkinga efanayo isinqumo kalula kakhulu Dryu Berrimor. Umlingisikazi yasishintsha indima, yaphenduka villain ngokobulili, ngaleyo ndlela ukushintsha ukunakwa sesibukeli ku umdlalo wakhe hhayi ngeminyaka.
Kuhle izindima Dryu Berrimor
actress Filmography has kungathi izingalo ezingamakhulu amabili ifilimu nokubonga. Yiqiniso, kumafilimu eziningi kanye ogawuthola Drew kwadingeka kancane izingxenye, wadlala nebalingisi uhlelo lwesibili, kodwa namanje lapho piggy yakhe yasebhange futhi eziningi imisebenti lenesitfunti, waqaphela phakathi best. Eyokuqala ukugqamisa Spielberg ifilimu "Alien" owanikhipha ukuthandwa Barrymore. actress engu-7 ubudala wadlalela udadewabo protagonist.
Ngo-2001, Drew inkanyezi kule drama kumnandi "Donnie Darko," actress uye wakwazi ukuveza imizwa nemizwelo uthisha ayemi ngaphezu uhlelo iyibonakalisa ngalesi. Futhi we nothi idrama ethi "Yonke indlela", ezithathwe 2009. Barrymore indima encane kuwo, kodwa obonakala khulu. Umlingisikazi babezizwa ubunjalo baso, bonisa umusa nobubele bukaNkulunkulu ubuntu bakhe. Amabhayisikobho best nge Dryu Berrimor kuyinto "Ever Ngemva," "owesifazane eqinile", "Angels Charlie sika," "Ubuthi Ivy," "The Wedding Umculi".
Drew - owesifazane ezimele. Akumangazi ukuthi umphathi wenkampani ukukhiqizwa Imbali Amafilimu, okuyinto actress eyasungulwa nge Nancy Givone ngo-1995. Umsebenzi wabo wokuqala kwaba comedy "Ungalokothi Been wamanga." Ngaphezu kwalokho, inkampani ifilimu isibe umkhiqizi amafilimu eziningana nge Drew Barrymore. Filmography ka actress ngokusebenzisa studio yakhe siqu agcwaliswa ngamabhayisikobho ezifana "Angels Charlie sika," "Zonke indlela", "Nge iso - Down, of the ishadi - ukuphuma", "Donnie Darko," "Izinsuku Okokuqala 50," "Ukuhamba Ibanga"! "isithembiso - ukuthi ngeke ishade."
ukuphila Siqu Drew
Barrymore kushada ngo-1994, umshado wakhe okwasusa esinamathambo, ngoba actress abakhethiwe wayemdala kakhulu kuye. Jeremy Thomas, umnikazi yokudlela chain Drew wahlala ncamashi 40 izinsuku, bese behlukana. Lapho elithuma okwesibili ukuze uzobopha elikasofasilahlane wanquma ngo-2001, umyeni wakhe wayengekho usomahlaya Tom Green. Kodwa lo mzamo ukuthola ukuphila komkhaya kujabulise akuphumelelanga, umbhangqwana uhlukana ngo-2002.
Drew ushintsho abalingani efana amagilavu, kodwa ukungenela ubuhlobo obungathi sina wayengeyena kuze 2007, lapho eqala ukujola umlingisi Dzhastinom Longom. Lovers yamemezela ukuzibandakanya kwabo, wonke waya lomshado, kodwa ngo-2008, banqamula ubuhlobo. Ngo-2011, Barrymore waqala lithandana Will Kopelmanom, ngemva konyaka, zamemezela ukuzibandakanya kwabo, kwathi ngo-June 2012, kamuva sashada. Septhemba 26 Ngawo lowo nyaka, actress wabeletha indodakazi, u-Olive, futhi waziwa ngo-November 2013, ukuthi Barrymore ulindele ingane yabo yesibili.
Forbes ochwepheshe bakholelwa ukuthi movie Dryu Berrimor akuyona lalihamba kahle kakhulu. Umlingisikazi okhokhela% 40 kuphela.
Drew enenkinga yokuqwasha.
Barrymore umlingisi ozithandayo - Dzhonni Depp.
Drew uyakuzonda nokuhlanza phansi.
First kiss nge Breckin Meyer.
Uchungechunge oluthi "Kiss Ukudlala" ( "Ukudlala Kiss"): nabalingisi izindima, indaba
Metin Chekmez - inkanyezi cinema-Turkish
Endi Makdauell (Andie MacDowell): Filmography, izithombe, kanye nempilo yakho
Hudyakov Konstantin vasilevich: Biography nesithombe
"Amabili Isigamu Abantu": indima abadlali. "Amabili Isigamu Abantu": American asiwona umdlalo wethelevishini iminyaka 2003-2015.
Uyini ubhiya eziqine kakhulu emhlabeni?
Iziqondiso eziningiliziwe mayelana nokuthi ukusetshenziswa isiraphu ye licorice impande: izinkomba kanye contraindications
Gantry crane ukusebenza kunoma yiziphi izindawo
Beautiful eziphilayo e design izitayela ezahlukene
Indlela hlola kokucindezelwa e injini? ukuhlola izimoto
Mortgage credit: emifushane ezibizayo
"Esishelelayo Iminyango! Isiteshi esilandelayo - "Voikovskaya '." Umlando Akhona eMoscow Metro